Kuwani waa sawirrada xayeysiinta ee Vivo X30 oo muujinaya dhabarkiisa iyo midabada uu ku imaan doono | Androidsis
El Vivo X30 Waa mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee soo socda ee shirkadda Shiinaha laga leeyahay. Midkani wuxuu ku saabsan yahay in la sii daayo, in kasta oo faahfaahin badan oo ay leedahay aan la shaacin, haddana waxaan horeyba u haysannay waxyaabo xayeysiis ah oo muujinaya.
Sawirada hoose ka muuqda, Supermodel-ka caanka ah ee Shiinaha Liu Wen ayaa la arki karaa isagoo qiraya taleefanka soo socda ee Vivo X30. Vivo waxay sheeganeysaa in taxanaha Vivo X30 loogu talagalay in lagu qaado sawir xirfadeed. Mobilada, xaqiiqdii, waxaa lagu qalabeeyaa aaladda kamaradaha afar geesoodka ah ee kiiskeeda dambe oo ka samaysan muraayad qalooca. Intaa waxaa sii dheer, waxay ballanqaadaysaa inay bixiso tikniyoolajiyad isku dhafan oo gaadheysa illaa 60x waxaana jiri doona muraayadaha loo yaqaan 'periscope lens' oo loogu talagalay kordhinta indhaha.
Wejiga hore ee Vivo X30 laguma arki karo sawirada aan soo dhejinay. Si kastaba ha noqotee, fiidiyowga xiisaha leh ee ay dhowaan soo saartay shirkadda ayaa shaaca ka qaaday in lagu qalabeyn doono bandhig feer-god ah. Taleefanka casriga ah waxaa lagu qalabeeyaa giraanta mugga iyo badhanka korontada oo ku yaal geeska midig. Sadarka bidix ee taleefanka ayaa leh batoon u heellan helitaanka kaaliyaha Jovi AI. Cidhifka kore ee taleefanku wuxuu leeyahay aaladda codka ee loo yaqaan '3.5mm Jack' oo gunta hoosteeda lagu qalabeeyey sameecad dibadeed iyo USB-C. Telefoonku wuxuu sii wadi doonaa inuu ku ciyaaro isboorti sawir qaade ah oo ah muuqaalkii hore.
Chipset Exynos 980 samaysay Samsung waxay awood u yeelan doontaa taxanaha Vivo X30. Tani waxay u oggolaan doontaa taageerada laba-qaab 5G. Qalabka, markiisa, wuxuu noqon karaa kii ugu horreeyay ee la yimaada JoviOS, oo loogu talagalay inuu beddelo interface-ka isticmaalaha FunTouchOS ee caadiga ah.
Dhawaan, Vivo V1938A / T casriga ah ayaa lagu arkay keydka macluumaadka hay'adda sharci dejinta ee 3C. Waxaa la rumeysan yahay inay noqon karto taleefanka Vivo X30 ama X30 Pro taleefanka waxaa lagu geyn karaa xeedho taageera 33W xawaare degdeg ah. Taxanaha Vivo X30 ayaa soo bixi doona bisha soo socota, laakiin taariikhda uu soo baxayo hadda waa la duubaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Kuwani waa sawirrada xayeysiinta ee Vivo X30 oo muujinaya dhabarkiisa iyo midabada uu ku imaan doono
Sheekada Xumantu waa madal aad u wanaagsan oo loo isticmaali karo goobooyin biyo si ay u gaaraan meel kasta